DABOCASE DABIICIGA AH EE LO'DA, LO'DA, DOOFAARKA, DIGAAGGA IYO RIYAHA: MIYAY SUURTAGAL TAHAY IN LA SIIYO KHUDRADDA CAGAARAN EE XOOLAHA, IYO MA KALA DUWANAANTA DALAGGA DALAGGA? - BEER CAGAARAN
Noocyada isticmaalka xayawaanka dabiiciga ah ee dabiiciga ah - ma suurtagal tahay in la siiyo bakaylaha, digaagga, riyaha iyo lo'da kale?
Dabocase calafka waa ili ah macdanta macdanta iyo pectin, sidaas darteed waa mid aad u faa'iido leh quudinta xayawaanka kala duwan.
Xilliga jiilaalka, ma lumiso hantideeda faa'iido leh, waxaa si fiican loo kaydiyaa oo u buuxiyaa bixinta fitamiinada jirka. Maqaalka ayaa ogaanaya in ay suurtogal tahay in lagu quudiyo xayawaanka leh khudaarta cagaaran.
Sidoo kale maqaalkan waxaad ku caddayn kartaa noocyada kala duwan ee dabocase calafka aad u baahan tahay inaad ku quudiso xayawaanka sida lo'da, ariga, bakaylaha, doofaarka iyo digaagga, iyo sidoo kale tixgeliyaan sababaha aadan ku siin karin karo xididada doofaarrada guinea, bakaylaha iyo qurxinta.
Miyuu suurtagal yahay in lagu quudiyo xayawaanka leh khudaarta cas
Labada beerood ee waawayn iyo kuwo yaryarba waxay u koraan dabocase calafka loogu talagalay isticmaalka xayawaanka xoolaha.
Cunto khaas ah oo faa'iido u leh quudinta, lo'da iyo idaha. Xaqiiqdu waxay tahay in xididdo ay ku jiraan xaddi badan oo qoyaan ah, siday u kala horreeyaan, soosaarka caanku u kordho. Caanaha xayawaanka ee cunaya khudraddan ayaa noqda mid la mid ah, mid aan qadhaadh lahayn.
Digaagga sidoo kale waxay si aad ah ugu falcelinayaan xayawaanka. Wixii quudintooda waxaa loo isticmaalaa oo kaliya xididada, laakiin sidoo kale dushooda. Khudaarta waxaa la siin karaa shimbirta labadaba la karkariyey iyo kuwa cayriin. Waxaa si gaar ah muhiim u ah in lagu daro xididada cuntada ee xilliga jiilaalka, marka jirku daciif yahay oo u baahan yahay fitamiino.
Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo dabocase calafka iyo cuntada loogu talagalay doofaarrada. Xaqiiqdu waxay tahay xitaa caleemaha dhirta waxay leeyihiin laba jeer protein ka badan oo ka kooban qoyaankooda. Intaa waxaa dheer, xididku wuxuu hodan ku yahay carbohydrateska si fudud loo dheefay.
Khamrigu waa jiirka, sidaas awgeed waxay dib u buuxiyaan qoyaankooda khudaarta. Beet - ilaha ugu muhiimsan ee qoyaanka, oo ay ku jiraan hodan ku ah vitamiin, taas oo muhiim u ah bakaylaha.
Waa muhiim. Daryeelka waa in la qaataa marka la isticmaalayo dabocase calafka sida xayawaanka. Xaalad aad u badan ama mid aan habooneyn ayaa lagu daaweyn karaa sunta.
Inkastoo beetroot uu yahay khudradda xididka leh, laguma talin in la cuno xididdo cufan ee cuntada. Tani waxay khuseysaa quraacda ornamental, doofaarrada guinea, hamsters.
Xaqiiqdu waxay tahay in xididdo ay ku jiraan fiber, taas oo waxyeeleyn karta caloosha cirridka ee xayawaanka kor ku xusan. Intaa waxaa dheer, dabocase calafka wuxuu keeni karaa falcelin xasaasiyad, taas oo inta badan laga helo hamsters iyo doofaarrada guinea.
Ma kala duwan yihiin khudradda cagaaran?
Wixii quudinta xayawaanka, noocyada dabocase ma aha kaalin weyn. Waxaa lagama maarmaan ah in la soo galo doorashada fasalka laga soo bilaabo marka la eego wakhti iyo wakhtiyada kaydinta. Haddii ay jirto baahi loo qabo kaydinta dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la koro noocyo taas oo ku habboon tan, taas oo ah, waqti dambe. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka dabocase cawska Ekkendorfskaya jaalaha ah halkan ka akhriso, iyo maqaalkan waxaad ka baran doontaa sida dabocase calafka kala duwan yahay sonkorta iyo kantiin.
Saameynta xayawaanka inta lagu jiro quudinta
Cows farxad weyn u cun cuni dabocase calafka. Iyada oo hordhaca ah ee loo keenay cunto ee xoolaha si weyn u kordhiyay dhalid caano.
Tirada khudaarta cufan ee la cunay waa in aysan ka badnayn 18 kiiloogaraam maalintii. Xeerkani waxaa loogu talagalay xayawaanka qaangaarka ah.
15 maalmood ka hor dhalmada waxaad u baahan tahay inaad joojiso dabka quudinta cawska.
Khudaarta cagaaran waxay ka kooban tahay walxaha caadada u leh dheef-shiid kiimikaad.iyo sidoo kale hagaajin dheefshiidka. Sidoo kale, sida lo'da, isticmaalka riyaha dabocase calafku wuxuu ka caawiyaa kordhinta qadarka caano iyo kordhinta content dufanka.
Wixii riyaha weyn oo miisaankiisu yahay 55 - 70 kiiloogaraam, waa ku filan inaad ku quudiso 3-4 kiiloogar oo khudaar ah maalintii.
Wakhti kasta oo sanadka, iyo gaar ahaan xilliga jiilaalka, shimbirku wuxuu u baahan yahay isticmaalka qudaarta qudaarta. Cunida miraha iyo dusha sare ee warshad caan ah ayaa caawiya buuxinta yaraanta vitamin-yada. ee jirka digaag. Natiijada, ukumaha ayaa la dabooli doonaa qolof adag, oo joonkuna wuxuu yeelan doonaa midab jilicsan oo xagaaga ah, taas oo muujinaysa caafimaadka shimbirta.
Tirada xididdo waa in lagu xisaabiyaa sida hal qof oo qaangaar ah uusan laheyn wax ka badan 30-40.
Khamiirku waxay si firfircoon u isticmaalaan miraha dabiiciga ah iyo dusha sare ee cuntada. Waa khudaarta aad u faa'iido leh, maadaama ay bakaylaha u baahanyihiin fibreedka dheef-shiidka caadiga ahi Cunidda dabocase calafka waxay u horseedi doontaa xaqiiqda ah in timaha xayawaanka ay noqon doonaan mid caafimaad qaba muuqaal, iyo sidoo kale hagaajinta dhadhanka hilibka.
Bakayle weyn oo aan waxyeello u geysan jidhkaaga wuxuu u isticmaali karaa ilaa 300 garaam oo dabocase calafka.
Waa muhiim. Beetjada ee xayawaanka xoolaha waa in si tartiib tartiib ah loo bilaabo. Si aad u bilowdo, waxaa fiican inaad ku quudiso bakaylaha leh khudaarta la kariyey.
Warshadu waa raaxo jecel digaagga. Waxay isticmaali karaan labadaba caws iyo karsan.
Natiijada quudinta quudinta ayaa noqon doonta mid aad u wanaagsan. Sababtoo ah xaqiiqda ah in khudradda cagaaran ay caadiyan dheefshiidka, kordhinta miisaanka xayawaanka ayaa kordhi doona. Muuqaal kale oo faa'iido leh ee xididdo waa hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka.Sidan oo kale, marka khudradda la cuno xayawaan, waxaa suurtogal ah in la yareeyo heerka baruurta hilibka.
Tirada khudradda cagaaran ee cuntadu waxay gaari kartaa ilaa 30 boqolkiiba inta wadarta cuntada la cuno maalin kasta.
Dabocase calafka waa mid aan lagama maarmaanka ah ee cuntada xayawaanka. Waxay leedahay waxyaabo faa'iido leh oo ka caawiya inay koraan caafimaadkooda, hagaajiyaan tayada alaabtooda.